Ka bilow Xannaano cusub Bariga Dhexe oo shaqo ka raadso Dubai
Ku bilow shaqo cusub cusub Bariga Dhexe!
Xirfadda Bariga Dhexe
Shaqooyinka Saudi Arabia - Liiska Shirkadaha ku yaal Boqortooyada Sacuudi Carabiya
Ka bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe
Ka bilow Xannaano cusub Bariga Dhexe. Inta badan idinka laga yaabee inaad shaqo ka raadineyso Dubai. Bariga Dhexe oo bixisa adeegyo fara badan oo loogu talagalay duulimaadyada kuwaas oo ah raadinta saliid iyo gaas, IT, iibinta, suuqgeynta iyo Fursadaha shaqooyinka ee Hotel ee Imaaraadka Carabta. 80 boqolkiiba dadka cusub ee shaqo doonka ah kuma dhasheen Emirates. Intooda badani waa Hindida iyo soo booqdayaasha Bakistaan gudaha Imaaraadka. Waxay shaqo cusub ka bilaabaan Bariga Dhexe waqti dheer kahor.
Kaliya lagu meelayn karo oo kaliya marka aad ku darto emaylkaaga hoosta. Waxaad u baahan tahay inaad si fiican u shaqeyso si aad shaqo u hesho. Marka waxaad u baahan tahay inaad si adag u xidhxidho maalin kasta shaqo raadinta Bariga Dhexe. Jawaabta keliya ayaa ah: Lacagta ayaa jirta. Habka ugu caansan waa inuu saxiixo oo uu shaqo ka helo shirkadeena Dubai. Suuqa maanta waa inaad weydiisaa naftaada ama kooxdayada sida shaqo looga helo UAE.
Dad badan oo shaqo doon ah way arki karaan xayeysiin ku saabsan sida loo acd CV-gaaga shaqo. Sidaas darteed waxaan dib u eegnaa taariikhdaada maanta, waa inaad iska qor oo raadso shaqadaada riyadiisa shirkadda Dubai City. Shirkadeena hadda qorista boosaska kala duwan oo ku yaalla Imaaraadka Carabta iyo Qadar. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu haynaa codsiyo ka yimaada Singapore, Australia, Kanada iyo New Zealand. Waxaanu ku takhasusay maareynta guud iyo maareynta maamulka Dubai. Iyo in ay ku jiraan iibka iyo suuqgeynta, maamulka koontada, IT iyo injineernimada Dubai. Ka bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe.
Raadso Shaqo dhammaadka bisha
Fadlan ku dar email-gaaga hoose, waanan ku dadaaleynaa Ku qor liiska ugu dambeyn bisha ama Beddel ahaan u fiirso websaydhka qaybta soo gelinta. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad eegto baakadaha noo kala duwan iyo adeegyada websaydhkeena si loo arko waxa ku habboon. Waxaan leenahay shaqooyin banaan oo furan oo badan oo ku kala baahsan Australia, New Zealand, Canada iyo Imaaraadka Carabta.
Ujeedkeenu waa inaan heysano xalka xirfadeed ee loogu talagalay qurba-joogta cusub ee magaalada Dubai. Bilaabeyso inaad ku ceyriso shaqadaada riyada oo fadlan iska diiwaan geli Shirkadda Dubai City. Kooxdayadu waxay sugeysaa inay kugu xiraan wakiilo ka socda Shirkadda Dubai oo kugu meeleeya UAE. Guji oo raac tilmaamahayaga shirkadda oo casuumad u dir shirkadeena. toos noola soo xiriir si toos ah maanta una hubi waxa aan kuu qaban karno.
Wax kasta oo aad ka timi, waxaan ka caawinaynaa adduunka oo idil. Tusaale ahaan, dadka ka yimid Pakistan ayaa awood u leh in ay bilaabaan shaqo. Sidaa darted, dhab ahaantii, ha ahaato meesha aad ka timaaddo, shirkaddayadu waxay kaa caawinaysaa inaad shaqo ka hesho Imaaraadka Carabta. Isla markaa, waxaad sidoo kale raadin kartaa wadamada kale. Mid ka mid ah tusaalooyinka waa Qatar iyo Shirkadaha Sacuudi Carabiya ee shaqaaleynaya.
Resume Resume si aad u bilowdo xirfad aad ku leedahay Dubai!
Ma rabtaa in aad shaqo ka hesho Shirkadda Dubai ku bilaw khubaro xirfad raadin xirfad shaqo! Kooxdayadu waxay ka shaqeyneysaa codsi kasta si loo maareeyo fursadaha shaqada ee la yaab leh. Mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican ee aan bixino waa shaqooyinka banaan ee suuqa shaqada ardayda cusub ee qalanjabiyay.
Meel kale oo muhiim ah ee xirfaddaada ayaa bilaabmi karta maanta. Soo hel shaqadaada riyadaada ee Emirates. Iyo hubaal Ka bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe. Meelaha aad bilowdid Waa shirkadaha shaqaalaynta ee Gacanka. Shaqooyinka Careerjet ee gobolka Gacanka iyo Iskuday shabakadan qorista ee ku yaala Gacanka. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Shirkadda Dubai City waxaad awood u leedahay Bilow cusub Xirfadda Bariga Dhexe!.
Resume Resume oo ah magaalada ugu dhaqsaha badan aduunka! Waxaan sidoo kale caawineynaa Philipino oo ku faraxsan inuu shaqo ka helo Dubai.
Shirkadaha Dubai - Ku bilow shaqo cusub Bariga Dhexe
Shirkadda Dubai City waxaa lagu aasaasay 2019. Laakiin waa in la xusuustaa in shirkaddayda shaqaaleysiinta. Xaalad kasta, maalin kasta qabashada hawlaha shaqo raadinta Kaliya maaha Dubai. Laakiin sidoo kale dalalka GCC. Si loo tilmaamo macaamiisheena waxay ka yimaadeen in kabadan wadamada 30. Shirkadda Magaalada Dubai waxay xiriirisa xirfadleyda raadinta mihnada la shaqeystayaasha. Si kale loogu dhigo, kooxdeena oo soo bandhigaysa shaqo raadinta ayaa ka caawisa cilmi baarista xirfadeed ee gobolka macluumaadka Dubai.
Marka la eego xaaladahaas, hadafkeenu waa inaan noqono doorka koowaad ee isbedelka degdega ah shaqaaleysiinta iyo shaqaaleynta suuqa shaqada ee haweenka. Iyadoo rajada laga qabo in shaqadeena shaqo raadinta ay awood u leedahay shaqaale caalami ah iyo musharrixiin cusub. Guud ahaan waxaa looga hadlayaa in loo qoro fursad shaqo cajiib ah magaalada ugu dhaqsaha badan adduunka. Ilaa waqtigan xaadirka ah, waxaa jira wax ka badan 1,000 oo ka mid ah qorayaasha ugu caansan adduunka iyo Shirkadaha Dubai.
Dubai, waxaad ka heli kartaa shaqooyin aad u fiican oo ku shaqeeya UAE. Waxaad raadin kartaa shaqooyinka Porsche ee Dubai. Waxaa sidoo kale jira shirkado badan oo Dubai ka shaqeeya 2018. Si aan u dhigno qaab kale, waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawino inaad shaqo bilowdo Dubai. Raadinta Ka bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe? Dib ugu soo celi Shirkadda Diyaaradaha ee Emirates Airline ama shirkadeena!
Intaas oo dhan Shirkadaha Dubai ka shaqeynta dhammaan suuqyada waaweyn ee 4: Qorista, Human Resources, Shaqooyinka dowladda, Maareynta Xirfadda. Kooxaheenna dhaqso ama gadaal ayey awoodi doonaan si aad u dhigto Dubai. Dhibaato la'aan, gaar ahaan UAE. Waxaa intaa dheer mid ka mid ah siyaabaha ugu badan ee loo heli karo shaqo helitaanka wareysi socodka gudaha UAE.
Markaad sameyso baaritaan wanaagsan oo loogu talagalay shaqaaleynta Dubai. Waa inaad si dhab ah uga fakartaa barashada shaqada ee UAE. Shaqooyinkaani waa kuwa ugu dhaqsaha badan ee la helo uguna fududahay in la gudbiyo wareysiga. Shaqo cusub Bariga Dhexe had iyo goor waxay u furan tahay shisheeye cusub. Sidoo kale shaqada Abu Dhabi waa hab caqli leh oo lagu kasbado dakhli hufan. Qatar iyo Kuweyt sidoo kale waa goob wanaagsan oo shaqo.
Dib-u-dejinta Bariga Dhexe waxay mar walba noqotaa hawl aad u adag. U soo guurista Dubai oo ah dalxiis had iyo jeer ku qaadato wakhti iyo dadaal. Wixii dhibaato ah ee aad isku dayi lahayd inaad ka gudubto. Nidaamku wuxuu isku mid yahay dal kasta oo Bariga Dhexe. Ka bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe adiga oo isticmaalaya shirkadeena.
Shaqaalaha cusub ee UAE
Shirkadda Dubai City waxay siisaa xubnaha xubin aan laga daboolin macluumaadka shaqo raadinta ee Emirates. Shirkadeena way ka duwan tahay kuwa kale. Sababtoo ah waxaan dhajinaynaa buuxa oo ka kooban firfircoonaan iyo asal ahaanba. Kaliya inay ku caawiyaan bilaabid xirfad cusub. Qalabka raadinta shaqadu wuxuu siiyaa fursad shabakad caalami ah duulimaad kasta oo ku yaal Dubai. Nidaamkeenna waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo astaamaha shaqo raadinta. Ka caawinta shirkadaha inay helaan shaqaale cusub. Iyo an adeegyo cilmi baaris oo hufan oo ku yaal Dubai.
Khudbado ka yimaada dhammaanba soo galitaanka Imaaraadka Carabta. Inta badan iyaga booqashada UAE shaqo raadin iyo dhamaadka, kaliya 20% iyaga ka mid ah waxay helayaan shaqo. Marka, hadaad tahay bixiyeyaal cusub oo raadinaya in lagu meeleeyo Dubai. Waxaad u baahan tahay inaad si adag u shaqeyso si loogu helo mashruucyo cusub. Kooxdayada ayaa u suurta gelineysa dhammaan kharashyada ka caawinaya iyaga shaqo raadinta. Qurbaha Ka bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe.
Shirkadda Dubai City waxay hadda si aad ah uga shaqaysaa meelaynta musharax aan helayno. Waxba kuma jabno haddii ay ka yimaadeen Hindiya ama Koonfur Afrika. Maamulkayagu wuxuu si fiican ugu shaqeynayaa shaqo doone kasta. Kooxdayada takhasuska leh ayaa sidoo kale abuuray Kooxda WhatsApp Dubai. Xaqiiqdii dhabta, tani waxay ka caawisay dadka 20,000 xirfadlayaasha ah ee ka shaqeeya UAE.
Khabiiradayada shaqo raadinta waa xirfadlayaasha ku habboon
Taageero iyo warbixin shaqo raadintaada waa waxa ugu weyn. Shirkaddayadu waxay qaadatay tababar is-dhexgal ah oo ku saabsan mowduucyo kala duwan oo kaladuwan. Sababtoo ah Dubai ayaa ah meesha ugu wanaagsan ee shaqada, gaar ahaan safaaradaha. Sidoo kale, waa inaad tixgelisaa xirfadda bangiga waaxda. Waa habka ugu wanaagsan ee looga bixi karo dadka jeclaan lahaa in lagu meeleeyo Emirates.
Si aan daahin, Shirkadda Dubai City waxay gacan ka geysatay 150,000 + xirfadleyaal ku raadsanaya aduunka oo dhan. Waqtigan xaadirka ah murashaxiintayada safarka ah ee imminka imminka ka imanaya dalal kala duwan oo ah 70. Falanqaynta ugu dambeysa, shirkaddeena ayaa ku siin doonta fursado gaar ah si ay ula xiriiraan shaqaleysiiyaasha UAE. Gaar ahaan marka aad dhisto taariikhdaada xirfadeed isla markaana aad khibrad qiimo leh u hesho run ahaantii si aad u xisaabiso mushaharkaaga.
Waa in la xasuusto in hogaamiyaasha fikirka saameynta leh. Iyo dabcan, go'aan-gaadhayaasha iyo ganacsadayaasha raadinaya kaliya musharixiinta ugu wanaagsan. Dhanka togan, waxaad noqon kartaa qalbiga warshadaha magaalada Dubai. Haddii aad waayo-aragnimo ku filan ka hesho suuqa adduunka. Xaqiiqdii waad shaqo ka heli kartaa Imaaraadka Carabta. Tusaale ahaan, badankood Shaqaalaha India ayaa diyaar u ah inay ka shaqeeyaan Dubai. Sidaas darteed haddii aad ka timid India waxaad yeelan doontaa fursad aad u weyn oo aad ku shaqeyn karto sida dalxiis. Ku bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe iyo Resume Resume.
Hay'adaha Qorista ee UAE
Ha ku waarin wakhtigaaga dib u dirista liistadaada qorayaasha khaldan. Kaliya u dir boostada hay'adaha shaqaalaynta ugu fiican ee UAE. Waxaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato sidii aad ku heli lahayd dariiq aad ku hesho shaqooyinka Dubai. Oo bilow shaqo cusub ee Bariga Dhexe super fast. Magaalada Dubai waa meel runtii la yaab leh oo lagu noolaado laguna shaqeeyo. Laakiin si aad halkaas shaqo uga hesho oo aad u maamuli karto noloshaada. Waxaad ubaahantahay inaad si xariif ah u dhaqaaqdid. Caddayn badan oo qasab ah taas wuxuu kaa caawinayaa inaad ku shaqeysid shaqo waa resumeygaaga.
Hay'adaha Qorista ee UAE Hubinta in ka badan 500 CV maalin kasta. Waa wax badan, dhanka taban adiga, maahan qofka kaliya ee shaqo la’aan ah. In ka badan 95% shaqo doonka ah ayaa jeclaan lahaa inay ku bilawdaan meheradda cusub Bariga Dhexe isla goobta. Baro Career cusub Bariga Dhexe ee Hindiya. Ka bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe.
Haddii taasi u fududaan lahayd sida ay u eg tahay in la sameeyo. Salka ku haysa in shirkaddeena gacan ka geysaneyso sidii ay u gaari laheyd una maareyn laheyd wakiil walboo shaqaaleysiinta. Isla mar ahaantaana codsi si taxaddar leh loo hubiyo. Sababtoo ah waxaad tahay a shaqo doon iyo wakiilka shaqaaleynta ayaa ah kan keliya ee kaa caawin kara inaad shaqo hesho. Kuwa badan baa jira goobaha shaqada aad Google ka heli karto.
Si aad uhesho hab kale, waxay qaadan doontaa wareega 3 si aad u dirto CV-gaaga. Iyo bilooyin 3 kale oo kaliya waxay u diraan faahfaahinta arjigaaga Shirkadaha Dubai. Dhanka kale, qorayaasha waxay hareerayaan toddobaadyo 8-12 si ay ugu dhigaan musharaxa. Si kastaba ha ahaatee, musharrixiinta caalamiga ah waxay qaadan karaan waqti dheer.
Sida ugu fiican ee loo qabashada shaqada si dhakhso leh ayaa loo adeegsanayaa tilmaamaha shaqooyinka gacanka khaliijka. Waxaad ku heli kartaa shaqo aad u fiican adoo isticmaalaya annaga WhatsApp kooxaha Dubai. Kooxdayada maaraynta ayaa Dubai ka dhex abuuray kooxo la yaab leh. Waxaan gacan ka geysaneynaa safarro cusub oo lagu meeleeyo Imaaraadka Carabta. Codsashada cusub ee qorista waa maalin walba waxaa lagu dhejiyaa hageyaasheena Dubai.
The Whatsapp Dubai Xiriirrada kooxeed waxaa loo sameeyaa shaqaale caalami ah oo caalami ah. Gaar ahaan dadka leh khibrad fiican. Tusaale ahaan, haddii aad tahay haysashada MBA waxaad ka heli kartaa shaqo Dubai. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, ayaa runtii lagugu meelayn karaa shaqooyinka mushaharka badan laga bixiyo ee ku yaal Dubai. Shirkadda Dubai City waxay dhab ahaantii si fiican u ogtahay inay ka joojineyso meheradda shaqaaleynta WhatsApp. Gaar ahaan hadaan ka hadlayno bariga dhexe.
Dhinaca kale, waxaad sidoo kale hubin kartaa noo WhatsApp ee shaqooyinka qaybta. Iyo ku dhajinta Resumeygaaga dalal dhowr ah on our Tilmaamaha. Adigoo hubinaya dhamaan kooxda wax ka qabashada Whatsapp. Waxaad si cad u arki kartaa cidda la shaqaaleysiin karo iyo cidda aan shaqaalayn karin. Ka bilow shaqada cusub ee Bariga Dhexe shirkadeena !.
Raadinta shaqooyinka Dubai ee hab xaadir ah
Hab kale oo macquul ah helitaanka banaanbaxyada Dubai. Waa in loo diro codsiyo badan shirkado badan. Tusaale ahaan, waad u istcimaali kartaa adeeg qaybinta resumeyga inaad dhigatid Khubaro caalami ah ayaa ku sugan Magaalada Dubai. Halkaa, run ahaantii, waxaa jira dalabyo badan oo shaqo oo loogu talagalay duulimaadyada Bariga Dhexe. Kooxdayadu way abuurtay tilmaan si aad u suuq-gareeysid boggaaga Dubai. Motivation waa furaha lagu helo shaqo ku jirta UAE.
Dhinaca kale, shaqada telefoonka gacanta Raadinta waxay noqon doontaa fikrad cilmi ah si loola qabsado. Waxaan sidoo kale caawineynaa shaqooyin ka jooga Dubia ee Koonfur Afrikan dheddig Dubai waxay qiimeeyaan noocyada noocan oo kale ah.
Waligaa ha nixin iyo nasiib wacan xirfad aad raadineyso Bariga Dhexe!
* Isugu baro Is-qorista Aasaaska ah + Waad koobi kartaa oo ku dhejin kartaa CV halkan!
Naftaada ku bar bar sida saxda ah! Waxaad ku dari kartaa CV halkan! - (Ctrl + C, Ctrl + V)*